Bayer munich oo barbareysay Rikoorkii barcelona ee lixda koob xilli Guardiola uu ka hadlay guushaas.
Home Horyaalka Germalka Bayer munich oo barbareysay Rikoorkii barcelona ee lixda koob xilli Guardiola uu...
Pep Guardiola ayaa ku xujeeyay Hansi Flick iyo Bayern Munich ku guuleysiga Sedaxleey kaabab ah dagaalka ka dib markii kooxda ka ciyaarta Bundesliga ay barcelona ku barbareeyeen rikoorkaas iyadoo barcelona ay sameysay halsano ku qaadeen koob lix ahaaoo.
Bayern ayaa garaacday kooxdaTigres si ay ugu guuleystaan Club World Cup khamiista, iyagoo ku daray horyaalkooda Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, UEFA Super Cup iyo DFL-Supercup sanadkii la soo dhaafay.
Markii ay sidaas sameynayeen, waxay noqdeen kooxda labaad ee abid ku guuleysta 6 koob oo u dhiganta taas oo uu hore kaliya u heystay halyeeyga kooxda barcelona pep Guardiola sanadkii 2009.
Farriin fiidiyoow ah oo uu soo dhigay Twitter-ka, ayuu Guardiola ku yiri: “Hambalyo weyn ayaan u dirayaa dhammaan qoyska reer Bayern guushaan cajiibka ah, inay noqdaan kooxda heysata Koobka Adduunka iyo gaar ahaan inay ku guuleystaan lix koob.
“Aad ayaan u faraxsanahay, aad ayaan u hanweynahay, hambalyo weyn ayaan u dirayaa qof walba, gaar ahaan Hansi [Flick], ciyaartoydii iyo shaqaalaha qolka jiifka “Laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego Hansi inaad tahay kooxdii labaad ee ku guuleysata lixda koob oo isku xigta!
Hortaada, waxaa jiray koox kale, Barcelona … marka waxaa laga yaabaa inaan wici karo Messi iyo barcelona waxaanan u ciyaari karnaa horyaalnimada toddobaad? Ii sheeg goorta iyo meesha aan joogi doonno!”
Bayern ayaa ku dhawaad ku guuleysatay lix koob ka hooseeya Guardiola sanadkii 2013. Ka dib markii Jupp Heynckes uu ku guuleystay seddex koob 2012-13, Guardiola wuxuu ku guuleystay Club World Cup iyo UEFA Super Cup xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee Bavaria, laakiin waxaa guuldarro ka soo gaartay kooxda Borussia Dortmund koobka DFL-Supercup.
In kasta oo Guardiola uu wejigiisa ka muuqdo madaama uu la tartamayay kooxdiisii hore, weli si weyn ayuu caan ugu yahay labada Barca iyo Bayern si uu awood ugu yeesho inuu soo jiito ciyaar bandhig.
Dabcan, farqiga 12-ka sano ah ee u dhexeeya labada koox ayaa ka dhigaya Bayern inay faa’iido weyn ka hesho garoonka.
In kasta oo ay hadda isu xaqiijiyeen inay yihiin horyaalnimada adduunka, kaliya seddex ciyaartoy oo bilaabay guushii finalka Champions League ee 2009 – Lionel Messi, Sergio Busquets iyo Andres Iniesta – ayaa weli ciyaaraya.
Previous articleJurgen Klopp oo qorsheynaya in uu dib u habeyn ballaaran ku sameyo Liverpool iyadoo lix xiddig ay bixi karaan
Next articleArsenal oo ku guuldareysatay habkii ay kusoo qaadan leheed Riqui Puig.